> Resource > Lugood > Mid ka mid ah Lugood Library Iyadoo Multiple Macs
Apple oo heysata music copyright Labada qurxisay si ay u sameeyaan in ay aad u adag tahay in la effortlessly wadaagno music on kombiyuutarada badan (Windows iyo Mac). Marka aad furaysto qalab Apple lagu computer ah, aad qaadato halista ah ee ku tirtirto wax walba oo ku lug leh qalabka. Si kastaba ha ahaatee, WordPress, xal cajiib ah kaydinta daruur, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhisaan a maktabad bartamaha Lugood iyo hagaagsan oo dhan your computer iyo qalabka la. Habkan, inaad gaarto goolkii - Mid ka mid ah maktabadda Lugood, qalabka kala duwan / Macs - hagaagsan iyo gurmad. Dhaca waxaa ka mid ah internet iyo DropBox xadka bannaan (hab $$$).
Fiiro gaar ah: haddii aad rabto in aad la wadaagto maktabadda Lugood aad network, kaliya aad u baahan tahay in aad qotomisay Home Sharing in Lugood.
Nidaameed Lugood Library dhamaan Kombiyuutaro la DropBox Your
WordPress bixisaa 2GB (ilaa 16GB u gudbinaayo dadka) boos lacag la'aan ah . Haddii maktabadda Lugood aad uu yar yahay oo ku filan, oo aad ka iibsan doonaa meel bannaan oo dheeraad ah si ay u hagaagsan maktabadda weyn Lugood. Laakiin 2GB waa bilow wanaagsan. Bal aynu eegno sida loo sameeyo a Lugood maktabadda dhexe la DropBox.
Waxayaabaha ah inaad ogaato Ka hor inta Bilaabidda
1. Ma jirto baahi loo qabo in u hagaagsan oo dhan Lugood maktabadda on WordPress si aad u computer, keliya marka aad rabto in aad. WordPress qoreysa hab hagaagsan oo la xushay.
2. Si looga hortago arrimaha syncing kasta, ku dhow Lugood kahor intaanad furin ilaa mashiinka oo kale. Waxaan ognahay in ay tani waa qosol ah, laakiin waxaa jira ma aha xal fiican ee syncing maktabadda Lugood, sax?
3. Waxaad waxa lagula talinayaa inay gurmad maktabadda Lugood si aad u drive dibadda in ay ka fogaadaan wax u socdaan faraha.
4. Update u Lugood ugu dambeeyey, ama hubi in qoraalkii Lugood on mashiinada waa isku mid. Versions waaweyn ee Lugood uma isticmaali karo maktabadda ee qoraalkii dambe ee Lugood.
5. Hubi si aad u hubiso ikhtiyaarka "files Copy in Lugood Media folder markii isagoo intaa ku daray in maktabada" in Lugood> rabtid> Advanced.
Diyaar ma tahay? Bal aan ka bilowno abuurista maktabad Lugood on WordPress.
Talaabada 1: dhaqaaq Lugood Library
Marka aad soo dajiyo DropBox, meel DropBox la abuuri doono. Raadi iyo meesha this dhaqaaqo maktabadda Lugood aad . Waxaad kaloo lagula talinayaa in ay isticmaalaan isla goobta DropBox guud ahaan mashiinada badan. Tusaale ahaan, meesha uu DropBox sida caadiga ah waa "C: Documents iyo SettingsAdministratorMy DocumentsDropbox" for Windows iyo "Users // DropBox / "u Mac. Haddii aad bilowdo wax walba oo cusub, dooro meesha DropBox sida maktabadda goobta Lugood.
Hadda bilaabi u hagaagsan aad Lugood maktabadda la DropBox. Waa fikrad wanaagsan inaad tan sameyso habeenkii iyo weekend ah si looga fogaado dhibaato Upload kasta. Waxaad sidoo kale u leeyihiin in ay mararka qaar sugi WordPress si ay u diyaariyaan maktabadda Lugood si aad u heli karto mashiinka kale.
Talaabada 2: sheeg Lugood kasta Halkee Raadi Library
On qalab la mid ah (iPhone / iPad) ama computer, rakibi WordPress iyo login la account ka mid ah la sheegay in ku kombiyuutarada kale. Markaas Lugood furo by haysta hoos alt / doorasho muhiim ah (ama muhiimka ah Isbedelkaas Windows) inay soo qaadaan Lugood doorashada daaqadaha maktabadda. Calan maktabadda Lugood in ay meesha DropBox, ama abuuraan maktabad cusub meesha uu DropBox. WordPress u hagaagsan lahaa content online oo ha aad jeceshahay in aad Lugood.
Talaabada 3: Isticmaal Lugood Maktabadda Dhexe
Hadda waa waqtiga imtixaanka. Isku day dayanayaan on makiinad qaar ka mid ah heesaha cusub si Lugood (File> Add to Library). Marka aad dhamaysid, ka tago Lugood oo la furo ilaa mashiinka oo kale. Haddii songs kuwa horey u joogey - sida in ay ahaadaan (WordPress " loo sahlo nidaamka LAN "waa arin la dooran by default baaro labada dhinac mashiinada) - dhoola, aad leedahay mid ka mid ah maktabadda Lugood qalabka kala duwan iyo kombiyuutarada .